कहाँ बनाउँने प्रदेश नम्बर २ को राजधानी ? – Saurahaonline.com
कहाँ बनाउँने प्रदेश नम्बर २ को राजधानी ?
बारा , १० पुस । राजधानी कहाँ बनाउँने भन्ने विषयमा अहिले निकै नैं चर्चा चलिरहेको २ नम्बर प्रदेश नौं हजार ६ सय ६१ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यस प्रदेश करिब ५४ लाख जनसंख्या रहेको छ । यो प्रदेशमा आठ वटा जिल्लाहरु बारा , पर्सा , रौतहट , सर्लाही , धनुषा , महोत्तरी , सिराहा , सप्तरी रहेका छन् ।
मैथली भाषीको बहुल्य रहेको यस प्रदेशमा भोजपुरी , थारु सहिँत बाहुन , क्षेत्री , जनजाती , मुस्लिम सहिँतको धेरै भाषा भाषी छन् । सामाजिक विविधता र जनसंख्याको घनत्व अधिक रहेपनि मानव विकास सूचकका आधारमा दुई नम्बर प्रदेश राष्ट्रिय औषध भन्दा निकै तल छ । यस प्रदेशमा रहेका जनताको प्रति व्यक्तीको आम्दानी नौं सय ६७ डलर छ । यो अन्य प्रदेशको तुलनमा न्यून नैं हो ।
शिक्षा , स्वास्थ्य , खानेपानी , सरसफाई , आम्दानी लगायतका क्षेत्रमा यो प्रदेश कमजोर छ । शिशु मृत्यू दर सबै भन्दा धेरै छ , भने जन्म दर सबै भन्दा बढी भएको प्रदेश हो । साक्षारता प्रतिशत पनि राष्ट्रिय औषध भन्दा कम छ । मुलुकको कृषि तथा पशु क्षेत्रको उत्पादनमा दुई नम्बर प्रदेशको योगदान १३ प्रतिशत रहेको छ ।
दुई नम्बर प्रदेश सामाजिक , आर्थिक , पुर्वाधार विकासमा सा¥है कमजोर छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश दुईमा गरिबी दर उच्च रहेको छ । यस प्रदेशमा ४७ दशमलव ९ प्रतिशत गरिबी रहेको प्रतिवेदन छ ।
सिमरा कलेजको अर्थ शास्त्रका प्राध्यापक केदार बिशुरालका अनुसार गरिबी , बेराजगारी र अशिक्षा यस क्षेत्रको प्रमुख चुनौंती हुँन् ।
प्राकृतिक स्रोत साधनमा कमि भएपनि आफ्नैं खुट्टामा उभिन्न सक्ने प्रदेशको रुपमा रहेको भने देखिन्छ । बिरगंज र जनकपुर जस्ता आर्थिक , सांस्कृतिक महत्वका केन्द्र यही प्रदेशमा छन् ।
नेपाल कै एक मात्र रेल सेवा पनि यही प्रदेशको जनकपुरमा रहेको छ । यद्यपी हाल यो सेवा बन्द अवस्थामा रहेको छ । यो प्रदेश चार वटा विमान स्थलले जोडिएको छ । राजधानी जोड्ने मुलुक कै छोटो काठमाण्डौं–निजगढ दु्रत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) र बाराको निजगढमा बन्न लागेको दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमान स्थल यो प्रदेशको सबै भन्दा ठूला सम्भावना रहेको बकुलिया क्याम्पसको अंग्रेजी विषयका प्राध्यापक कालिका प्रसाद ढकालले बताए ।
यो प्रदेशमा पर्यटनको आधार पनि बलियो छ । भने धार्मिक पर्यटनको रुपमा पनि यो प्रदेश बलियो देखिन्छ । बाराको बरियारपुर स्थित विश्व प्रशिद्ध गढीमाई मन्दिर र जनकपुरको जानकी मन्दिर जस्ता प्रशिद्ध धार्मिक स्थल यहीं छन् ।
मुलुक कै आर्थिक केन्द्र बिरगंज–पथलैया औद्योगिक करिडोर जहाँ हजार भन्दा बढी उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । मुलुकको आर्थिक केन्द्र बिरगंज भन्सार यहीं छ भने देश कै सबै भन्दा ठूलो चार कोषे झाडी बन पनि यसै प्रदेशममा छ ।
प्राध्यापक बिशुराल उपयोग गर्न सके भौगोलिक सहजताले उद्योग कलकारखानाका लागि यो प्रदेश उपयुक्त हुँन्छ । भने खेती योग्य जमिनको भरपुर उपयोग गर्न सके धनी प्रदेशका रुपमा उदाउँन सक्ने प्रसस्त सम्भावना छ ।
काठमाण्डौं–निजगढ दु्रत मार्ग , निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमान स्थल , आर्थिक विकास क्षेत्र (सेज) , रेल मार्ग लगायतले दुई नम्बर प्रदेशलाई सवल एवंम् सक्षम प्रदेशका रुपमा स्थापित गराउँन सक्ने आधारहरु बलियो रहेको छ । यद्यपी त्यसको उपयोग कसरी हुँन्छ , भविश्य त्यसैमा निर्भर रहँने छ ।